Gnome 3.26 iri kunze | Linux Vakapindwa muropa
Vanoda software yemahara muhuwandu uye madhesiki kunyanya vari mune mhanza. Ndichangobva kuzivisa iko kuwanikwa kweiyo Gnome 3.26 desktop. Iyi vhezheni itsva yeGnome, iyo inonzi "Manchester", yaunza nhau dzinotyisa.
gnome 3.26 anouya kuzopemberera makore makumi maviri eiyi tafura-refu yakamira, chimwe chinhu chakaitika muna Nyamavhuvhu 15. Kupemberera, kunouya nekuvandudzwa kweiyo Flatpak yekupakata sisitimu, emoji typing rutsigiro uye zvakare nyowani masetani epaneru, zvichirerutsa mashandiro ayo.
Mukuwedzera, Gnome Shell yakagadziridzwa, iyo ikozvino ine injini ine simba yakawanda kupfuura nakare. Iyo aesthetics yedesktop yakave zvakare yakagadziridzwa zvakanyanya, kupfavisa iwo maficha uye kugadzira iyo ine hushamwari uye yakajeka kujekesa.
Uye zvakare, iyo zoom kutonga mune yemufananidzo mupepeti yakagadziridzwa, yakagadziriswa kukwidziridzwa kune yakakwira tsananguro resolution, yekuisa uye yekubuda maitiro tarisisa yakagadziridzwa zvakanyanya uye chishandiso chekugadzira ISO mifananidzo yakagadziridzwa zvakare.
gnome 3.26 zvirokwazvo chikuru kugadzirisa, kunyanya sezvo ichave iyo inoratidza kudzoka kweUbuntu kuGnome. Munguva yemakore ekupedzisira, Ubuntu akashandisa Kubatana sedesktop huru, asi nekuda kwekutadza kwedesktop iri, Gnome yakave zvakare desktop yakasarudzika yeCanonical operating system, neGnome 3.26 iri iyo ichave nerukudzo rwekuva kutanga kweichi chitsva chaive mukati Ubuntu 17.10.
Uyewo, desktop iyi ichawedzerwa kune zvinyorwa zvekunakidzwa kwakos, senge Arch Linux. Uye zvakare, vashandisi vevashanduri vekare vachakwanisa kusimudzira pasina dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Gnome 3.26 iri kunze
Asi iyo chifananidzo iwe chaunoisa hachitaridzika kunge gnome, ndeye budgie? zvakaitika kwauri zvakare.
Ini ndinofunga ndeye Gnome, asi yakagadziridzwa nezvakawedzerwa. Zvisinei, iyo nhau yekusunungurwa kweGnome 3.26 yakanaka, saka tarisira kwairi.
Ndekupi kwandingaitore pasi kuti ndiedze?
Ini ndinofunga unogona kuikanda muhupenyu modi kuti uedze, asi kunyangwe yakatoburitswa zviri pamutemo, zvisinei Ubuntu vashandisi vanozokwanisa kuinakidzwa muUbuntu 17.10 vhezheni, vekutanga kuigamuchira ndevashandisi veFedora.
Zvakanaka, ndinofunga openuse tumbleweed yatove nayo, pamberi pegomba rakapunzika risati rabuda neiyo gnome -next repository, asi ini ndinofunga iyo yekupedzisira mufananidzo yatove ichisanganisa iyo.
Ini ndinosimbisa kuti openuse tumbleweed yatove negnome 3.26 kuti iwe ugone kuitora pane iyo tumbleweed portal
Uku kutenderera kwekuburitsa kugovera kunoshanda ne rpm mapakeji uye zypper package maneja.
Ini ndiri mushandisi weFedora, uye kunyangwe ndaive nenguva yakaoma kuenderana neGnome 3 pandakasiya, ndakazokwanisa kuibata. Dambudziko nderekuti rinoshandisa zviwanikwa zvakawanda (zvinoenderana nemasevhisi atinoshandisa) asi mune yekumisikidza yakajairwa inondipedza 1 GB ichangoiswa, ine maakaundi akaomeswa epamhepo, WIFI neBluetooth. Ndafunga kushandisa Fedora kutenderera neCinnamon, uye ndinofara nenzvimbo iyi. Uye haina kana kutora 7 GB yekurangarira. Ini ndichaedza iyi nyowani vhezheni yeGnome kuti ndione kana vakarerutsa zviwanikwa zvishoma, uye ndione izvo zvitsva. Kwaziso.
Ini ndinogara naMate!
Yakanga iri nguva inguva Ubuntu yakadzokera kuGnome, ndicho chikonzero nei ndakasiya kugovera pakutanga.
Nenzira, ndanga ndichishandisa iyo desktop muArch kwemavhiki ikozvino uye handizive kana kuchine tereyi pane yekumashure mabasa kana kana iyo yekumisikidza yakaiswa zvisizvo. Pane chero munhu anondiudza kana yakanyangarika kana kuchinja?